I-Valencia yamahlaya ka-2015 | Izincwadi Zamanje
I-Valencia yamahlaya ka-2015
I-Valencia yamahlaya ka-2015.
Besivele sikusho ngaleso sikhathi. IValencia izoba nomcimbi wamahlaya olinganayo ofanayo neBarcelona Comic Fair, hhayi ize, inhlangano isebenza egameni labanye I-Ficomic. Izobizwa njengoba wazi I-Valencia yamahlaya (Ngiyalithanda igama elikhethiwe) futhi yebo, kuzofanele silinde kuze kube sekupheleni kukaNovemba ngonyaka ozayo ukuze sibone ukuthi ivula kanjani iminyango yayo. Nayi incwadi yezindaba esemthethweni enalo lonke ulwazi oluhlobene noTebeo Valencia:
I-Valencia yamahlaya. IComic and Illustration Fair izobanjwa kusukela ngoLwesihlanu 27 kuya ngeSonto 29 Novemba 2015 eFeria Valencia. Lo mkhosi uhlelwe nguFeria Valencia ngokubambisana neFICOMIC, i-Associació d'Il.lustradors de València (APIV), iGremi de Llibrers de València, iValencian Comic Association (ASOVAL), i-Associació d'Editors del País Valencià (AE) . UTebeo Valencia uzovumela isivakashi ukuthi sijabulele ukunikezwa okuhle kwamasiko nezikaqedisizungu, okubandakanya imibukiso, imihlangano yokufundisana, imihlangano nababhali nezingqungquthela, kanye nezindaba zokuhlela zakamuva.
Kusukela ngoNovemba 27 kuya ku-29, 2015 uFeria de Valencia uzosingatha uhlelo lokuqala lweTebeo Valencia, iComic ne-Illustration Fair. Umcimbi omkhulu wamasiko oqala ngenhloso yokuba ngomunye wemicimbi yaminyaka yonke emkhakheni wezincwadi wamahlaya nowezithombe nokukhuthaza imboni yokushicilela ekhethekile kanye nokufundwa kwayo. Kungumkhosi ohlelwe nguFeria Valencia futhi uqondiswe yi-FICOMIC, inhlangano ehlelayo ye-Barcelona International Comic Fair kanye neBarcelona Manga Fair, ngaphezu kokugqugquzela izinhlelo ezahlukahlukene zokukhuthaza amahlaya ezinhlakeni ezahlukahlukene zamasiko nezenhlalo. UMongameli ohloniphekile walolu hlelo lokuqala uzoba ngumdwebi wamakhathuni waseValencian nomdwebi wemidwebo uSento Llobell futhi uzoba nesiqondisi kwezobuchwepheshe sikaDaniel Tomás.
Chofoza ku- Qhubeka ufunda ukuqhubeka nokufunda ukukhishwa kwabezindaba.
Ngohlelo lokuvelela nolukhangayo, umcimbi uzoba mnandi kubalandeli nasemphakathini jikelele. ITebeo Valencia izoba nabashicileli abahlukahlukene, izitolo ezidayisa izincwadi, izinhlangano nezinye izinkampani ezihlobene nomhlaba wamahlaya nemifanekiso. Uhlelo lwemisebenzi lwenzelwe zonke izethameli, phakathi kwazo okuzoba namasiginesha ababhali bakazwelonke nabakwamanye amazwe, imibukiso yezincwadi zamahlaya kanye nemidwebo enezindawo ezihehayo, imihlangano yokufundela yamahlaya, imihlangano yobungcweti, izikhala zokuzijabulisa, izikhala zezingane, amatafula azungezile kanye izingqungquthela. Ngokunjalo, abazobe behambele lo mdlalo nabo uqobo bazohlomula ngokwethulwa kwezinto ezintsha zomkhankaso kaKhisimusi.
Ukusuka eValencia kuya emhlabeni
Umcimbi waseValencian ujoyina ukunikezwa kukazwelonke kweminye imicimbi ekhethekile, kepha ngokuhlukahluka okuhlukile. Okokuqala, kufanele kuqashelwe ukuthi iValencia ngokomlando ibiyinhlokodolobha yamahlaya nemifanekiso, yamukela ingxenye yomkhakha futhi, ikakhulukazi, ababhali abavelele besikhathi esedlule nabamanje. Ngalo mqondo, kubalulekile ukugqamisa intando yalo mcimbi ukuqoqa ubufakazi balo mlando waseValencian, okhona nowesikhathi esizayo bese uwuguqula ube yizimbazo zawo eziyinhloko. Futhi inesinye isici esiyingqayizivele, ngoba iyigumbi lokuqala lalesi sayizi nefilosofi, evula ngokusobala ibanga lokufanekisa. Umncintiswano onobizo olucacile lwamazwe omhlaba, olusisiza ukuthi siveze ababhali bethu, osomabhizinisi kanye nezinkampani emkhakheni phesheya, futhi ngasikhathi sinye sisakaze izitayela zakamuva zamahlaya kanye nemifanekiso evela kwamanye amazwe.
UFeria Valencia ungumhleli womcimbi onomlando nesipiliyoni seminyaka ecishe ibe yi-100 enhlanganweni yeProfessional noma Public Fairs, Events kanye ne-Trade Shows. Kumele kuqashelwe ukuthi iFeria Valencia ingenye yezindawo zesimanje futhi ezinhlobonhlobo kakhulu eYurophu, ezinezindawo ezilungiselelwe ngokuphelele futhi ezihlomele cishe noma yiluphi uhlobo lomcimbi. Ngokunjalo, indawo yayo enhle inika amandla ukuxhumana kwayo ngqo nedolobha, zombili izithuthi zomphakathi (iMetro, iBus, iTram, iValenbici), kanye nezizimele (indawo enkulu yokupaka ngaphakathi).
Ngokwengxenye yayo, i-FICOMIC ifaka isandla ekuhlangenwe nakho kwayo nasekwakhiweni kwezebhizinisi njengomhleli weBarcelona International Comic Fair kanye neBarcelona Manga Fair. Umncintiswano wamahlaya weBarcelona umcimbi obaluleke kakhulu owenzeka eSpain kanti owesibili eYurophu ngenxa yokutheleka kwezivakashi, ukubamba iqhaza kwezinkampani ezibukisayo, imisebenzi kanye nomthelela kwabezindaba. I-FICOMIC iphendula izifinyezo zeFederació d'Institucions Professionals del Còmic, okuyinhlangano eyakhiwa ngo-1988 nalapho kumelelwe khona amaGuilds of Publishers, Booksellers and Distributors of Catalonia. Yinhlangano engenzi nzuzo inhloso yayo ukukhuthaza amahlaya.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » I-Valencia yamahlaya ka-2015